Ilay mpahay siansa ara-tsiansa: fototra iankinan'ny fahalalana ny siansa | Famoronana an-tserasera
Rehefa manokatra boky siansa (biolojika, fanafody, jeolojia, paleontolojia ary sns sns) dia tsy misy tsy fahampian'ny sary amin'ny antsipiriany lehibe izay Ampio izahay hahatakatra tsara kokoa ny foto-kevitra izay nohazavaina ao. Raha tsy misy ireo fanoharana ireo dia sarotra kokoa ho an'ny mpahay siansa ny mampita ny fahalalany sy ny fikarohana azy ireo amin'ny mpihaino maro kokoa sy maro karazana.
Fa iza no tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana azy ireo? Izy ireo no mpanazava ara-tsiansa. Ny fanoharana ara-tsiansa dia ny sampan'ny sary manokana amin'ny famaritana ny natiora amin'ny alàlan'ny teknika samihafa, toy ny sary, sary hosodoko ary sary an-tsary.
Te ho mpahay sary ara-tsiansa ve ianao? Andao hojerentsika etsy ambany ny sasany amin'ireo toetra tokony ho ianao.
1 Fantaro lalina ny lohahevitra mifandraika amin'ny fanoharana
2 Mamorona sary manazava tena
3 Mahafantatra teknika isan-karazany
4 Tohano amin'ny lahatsoratra
5 Gazety siantifika sy fikarohana
6 boky fianarana
7 Fikambanan'ny kolontsaina, taranja na orinasa mifandraika amin'ny natiora
8 Torolàlana momba ny natiora
Fantaro lalina ny lohahevitra mifandraika amin'ny fanoharana
Zava-dehibe ny hahafantaran'ilay mpanao sary ny lohahevitra nanaovana ny asany. Betsaka ny mpikaroka tsy voaofana amin'ny fanoharana izay manolo-tena amin'ny fanaovana an'ity karazana sary ity, saingy indrisy fa tsy mifanaraka amin'ny fotoana kely ananan'izy ireo izany, noho izany dia mazàna izy ireo manolotra ity asa ity amin'ny matihanina hafa. Zava-dehibe ny fahafahan'izy ireo mahatakatra tsara izay tian'ny mpikaroka ampitaina, manaparitaka ary manome taratra izany amin'ny sary.
Mamorona sary manazava tena
Ireo sary novokarin'ny mpanao sary ara-tsiansa dia tokony hihoatra ny mason'olombelona, maneho mazava ny firafitra, ny endriny, ny volony, ny refiny ...ny zavatra voajanahary izay soloina, amin'ny fomba izay izay mahita azy dia afaka manavaka tsara ny faritra ao aminy, dia afaka manao tsianjery azy ireo ary mampifandray azy ireo amin'ny sary hafa momba ilay lohahevitra. Tsy ampy ny mamorona sary kanto fotsiny, tsy maintsy sary manazava be izy ireo, izay mampiseho amintsika mihoatra ny zava-misy azontsika jerena amin'ny maso mitanjaka.
Mahafantatra teknika isan-karazany
Arakaraky ny hain'ny teknika fantatry ny mpanao sary, dia vao mainka tsara ny hisolo tena ny zavatra voajanahary amin'ny fampiasana teknika iray na hafa. Inona koa dia ho afaka hanatanteraka karazana baiko maro hafa, arakaraka ny tian'ny mpikaroka an-tsary aseho. Azonao atao ny mampiasa akrilika, ranomainty, loko rano, grafita ... ary izay rehetra azontsika eritreretina. Ny sary an-tsary koa dia lamaody amin'ity faritra ity.
Tohano amin'ny lahatsoratra
Ny lahatsoratra manazava mifandraika amin'ny sary (mampiasa zana-tsipìka, famoronana infografika, kisary, sns.) Dia fototra raha ny famenoana ny sarinay, mba ho feno araka izay azo atao.
Ary, amin'ny maha-mpahay sary ara-tsiansa, Aiza no ahafahantsika misambotra ny kanto?
Gazety siantifika sy fikarohana
Gazety siansa malaza misy isa marobe amin'ireny karazana sary ireny mba hitoriana amin'ny olona amin'ny fomba hita maso sy mahafinaritra kokoa, mampita fahalalana sarotra amin'ny fomba tsotra indrindra mba hahafantaran'ny ankamaroan'ny mponina azy, satria misy olona afaka mividy ireo gazety ireo. Misy magazine hafa manokana kokoa izay mampiasa mpanao sary ara-tsiansa ihany koa mba hampitana fahalalana sarotra kokoa.
Boky fampianarana misy ambaratonga fanabeazana feno sary maneho ny fahalalana izy ireo, manomboka amin'ny preschool, izay maha-zaza ny sary, hatrany amin'ny oniversite. Ankoatr'izay dia mazàna miovaova matetika ireo, noho izany dia ilaina ny asan'ny mpanao sary siantifika.
Fikambanan'ny kolontsaina, taranja na orinasa mifandraika amin'ny natiora
Misy fikambanana na orinasa marobe mifandraika amin'ny fanaparitahana fahalalana momba ny natiora ka hatramin'ny besinimaro, manomboka amin'ny ankizy ka hatramin'ny olon-dehibe. Hetsika fampiroboroboana valan-javaboary, fampianarana momba ny zavamaniry sy ny biby ao amin'ny faritra iray ...ny fahafaha-manao tsy misy farany.
Torolàlana momba ny natiora
Torolàlana momba ny natiora asehon'izy ireo anay amin'ny antsipiriany ny toetran'ny singa voajanahary an'ny faritra iray. Ny zava-misy aseho amin'ny sary dia ho teboka miampy ny fividianana mety ho an'ireo izay liana amin'ilay lohahevitra. Ireo torolàlana ireo dia mampiseho matetika ny zavamaniry sy ny toerana misy ny biby amin'ny alàlan'ny sary amin'ny antsipiriany.
Ny tranombakoka samihafa dia mampiasa an'io karazana sary io hanohanana ny sanganasan'izy ireo ary hahafantaran'ny besinimaro azy ireo bebe kokoa. Ohatra, ao amin'ny tranombakoka paleontolojika, izy ireo dia hanampy antsika hahatakatra ny fivoarana sy ny firafitry ny biby prehistorika iray, rehefa hitantsika eo anoloantsika ny taolany.
Inona no andrasanao manomboka hanoratanao ny natiora manodidina anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » The Illustrator mpahay siansa: fototra iankinan'ny fahazoana siansa
Inona no atao hoe VPN ary ahoana no anampiany anao any am-piasana